MALAKIA 3.16-24	F. 6 | Fitandremana Ankadifotsy
MALAKIA 3.16-24	F. 6
“INDRO EFA TONGA ILAY ANDRO”
Ny tanjon’ny faminanian’i Malakia sy ireo mpitondra ny hafatry ny Tompo dia ny hampiomana ny fon’ny olona hihaona amin’ny Tompo ka ho vonona amin’ny fiavian’io andron’ny Tompo io.
Hiavaka ny matahotra an’i Jehovah (16-18, 20- 21). Voarakitra an-tsoratra ny anaran’ny mpanaja ny Tompo sy mankamamy ny anarany (Eks 32.32; Apo 3.5; 13.8). Dia rakitra soa ho azy, hotsimbininy, hiavaka izy. Ho tsapany fa hafa ny olo-marina manompo an’Andriamanitra sy ny olon-dratsy tsy hanampo azy. Henoin’Andriamanitra ireo sady handray valisoa noho ny fanapahan-kevitra noraisiny sy ny faharetany. Hotehirizin’ny Tompo, harovany, hokarakainy sy hotiaviny.
Hiposaka ny Masoandron’ny fahamarinana hanasitrana sy hampifaly ireo nankato an’Andriamanitra. Tsy ho an’Isiraely ihany anefa izany fahatsarana rehetra izany fa omena ireo izay mino sy mankato an’i Jesoa Kristy ihany koa.
Hofongorana ny meloka (19). Hihatra ny fahatezaran’Andriamanitra. Hodorana tahaka ny vodivary sy tsy hisy hiangana ireo mpanao ratsy sy mpireheraha teo anatrehan’i Jehovah. (Obadia 18; Amosa 2.9). Marina amin’ny fitsarany ny Tompo.
Hisy ilay mpialoha lalana. Nambara fa handefa an’i Elia ny Tompo hialoha lalana Azy. Tsy hoe hiverina ety an-tany izy fa ny iraka izay alefan’ny Tompo dia hanao asa lehibe sy hitondra hafatra fampibebahana ny olona. Iraka hitaona ny olona hihavana amin’ny Tompo sy amin’ny olona samy olona. Tian’Andriamanitra izao tontolo izao ka mijery ny fomba rehetra izy hiverenan’ny olona amin’ny fitiavana ka tsy hiharan’ny fahoriana lehibe.(Matio 3.2).
Saintsaino : “Tadiavo Aho dia ho velona ianareo” Amosa5.4.